Dhageyso:Waxgarad Shacabka Soomaaliyeed Ku Guubaabiyay in ay Xoojiyaan Dagaalka Lagula Jiro Gumeystaha dalka kusoo duulay.
Madaxii Saadka guutada 12-ka April iyo ciidamo la socday oo ku dhintay Qarax ka dhacay degmada Hodon.
Nuur Cadde oo u dhintay Caabuqa Carona Virus.
Friday August 07, 2015 - 11:14:47 in Wararka by Super Admin
Nabadoon Maxamuud Cali Geeddi oo ay wareysatay Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan ayaa sheegaya in sababta Soomalida shisheeyuhu u gumaadayaan tahay iyadoo lagu haysto Diintooda, dadnimadooda iyo Dalkooda.
Inkastoo uu ciidamada dalka duulaanka ku jooga si guud uga hadlay, hadana wuxuu si gooni ah carabka ugu adkeeyay Itoobiya, waxaanuu soo qaatay taariikha hore oo iyada iyo Soomaalidu dagaalameen iyo dowladihii xiliyadaas Itoobiyaanka garabka siinayay.
Wuxuu sheegay in jiilalkii hore ay sabab u ahaayeen iney dalka soo gaarsiiyaan jiilka maanta iyagoo waliba usoo dhabar adeygay, wuxuuna sheegay in kuwa maanta looga baahan yahay in ay kaalintooda qaadaan.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Nabadoon Maxamuud Cali Geedi MP3
AMISOM oo xayiraad kusoo rogtay Xerada Xalane.
Dadka Carona uu ku dilay dalka Talyaaniga oo Toban kun kor udhaaftay.
Mareykanka oo noqday dalka Koowaad ee caalamka ladhiban cudurka COVID19.
Tahriibayaal Itoobiyaan ah oo ku dhintay dalka Mozambique,
Warar sheegaya in 6 qof Soomaali ah ay cudurka Carona ugu dhinteen dalka Sweden.
Dad ka badan 4,000 oo qof ayaa Cudurka Carona ugu dhintay dalka Talyaaniga.
Saacad walba waxaa dalka Iiraan ku dhimanaya 6 qof.
Video: Cudurka Carona Virus oo soo gaaray dalka Soomaaliya.